IiPisces kunye neCapricorn - Ukuhambelana kwiSini, Uthando kunye noBomi - Pisces
IiPisces kunye neCapricorn
I-Pisces ehambelana neCapricorn kuThando, uBomi, isondo, unxibelelwano, ubuhlobo kunye nokuthembela. x
IiPisces kunye neCapricornUkuhambelana ngokwesondo kunye nobudlelwane obusondeleyo
Mhlawumbi akukho ndlela engcono yokuphumla kweCapricorn, kunokuba ungene kubudlelwane kunye neqabane lePisces. Ubudlelwane babo bokwabelana ngesondo lunxibelelwano lwabantu ababini abanamandla, omnye wabo ungqongqo kakhulu kwaye unengqondo, kwaye omnye ubhetyebhetye kwaye uneemvakalelo kodwa bezithembile ngeenkolelo zabo. Umahluko phakathi kwabo uya kudala umtsalane onamandla, phantse ngokungathi ziimpawu ezichasayo.
Ubomi bokwabelana ngesondo ngaba balingane abanokwabelana nabo abuchazeki xa abalinganiswa babo bejongwa ngokuphandle. Kodwa ngendlela eyahlukileyo kunoMhlaza, iiPisces zinokufikelela kubunzulu beemvakalelo zeCapricorn ngokuziva okulula. Lo asingomcimbi wovelwano, kodwa ngumbandela weenyaniso zabo ezinzulu zangaphakathi. I-Capricorn ayikho into engathandekiyo, nangona kunjalo ukubanda kwabo kucacile, kwaye iiPisces zinokuba nengqiqo, nangona zibonakala zilahlekile kwiimvakalelo. Banokuvusa ezona mpawu zintle omnye komnye kwaye babelane ngobudlelwane obuqinileyo ngokuqondana okunzulu ngokweemvakalelo.
Ubomi babo bokwabelana ngesondo buya kuhamba ngendlela engaqhelekanga. I-Capricorn iya kuphefumlelwa ukuba ihambe kwaye ivule iqabane layo, ngelixa i-Pisces iya kumisa ngokulula uthando lwabo kwaye ifumane indlela yokubonisa ngokudibana ngokomzimba. I-Capricorn iya kuziva ikhululekile kwaye iiPisces ziya kuqala ukuzihlanganisa. Ukuba bahlala kunye ixesha elide ngokwaneleyo, banokwenza umdibaniso ogqibeleleyo wozinzo, ukuthembana kunye nemincili yeemvakalelo.
IiPisces kunye neCapricornThembela
Ngokufuthi baya kuqondana kakuhle ngokwaneleyo ukuze baluhlonele ulwalamano lwabo nokulugcina lucacile ekunganyaniseki. Oku akusoloko kunjalo, kwaye uburhabaxa obunokwenzeka beCapricorn ngamanye amaxesha bunokwenza iiPisces zithethe ubuxoki okanye ezimbini. Ngakolunye uhlangothi, ukuba iCapricorn ivaliwe kwaye ayifikeleleki, ukuthembela kuya kuphazamiseka yinto elula yokuba abazani kakuhle konke konke. Ubuhle bobudlelwane babo kwindlela yabo yokuthembela xa beqaphela ukuba bajongene nabani. Kuba omabini amaqabane akathembeli ukuba umhlaba uvuleke ngokulula, kuya kufuneka bawufumane, imihla ngemihla, omnye komnye. Oku kunokubonakala ngathi ngumdlalo okanye ukhuphiswano lokuphumelela ukuthenjwa kweqabane labo.
IiPisces kunye neCapricornUnxibelelwano kunye nengqondo
Ukuba nabani na unokukhuthaza iCapricorn, liqabane labo lePisces. Bobabini banokukhathalela kakhulu malunga nonxibelelwano kubudlelwane babo, kodwa iqhina labo liya kubavumela ukuba bayeke ukuthetha kwaye baqale ukuphulaphula. Bobabini baneentloni ngandlel’ ithile, yaye ukuze bazane, kuya kufuneka balumke kakhulu ukuze banikele ingqalelo omnye komnye. Yinto entle ukuba bobabini baya kufuna ukuyenza loo nto, bechukunyiswe bubume beqabane labo, bechulumancile kukwazana ngokunzulu.
Ingxaki kunxibelelwano lwabo inokuvela xa iCapricorn inikezela kwiimbono neenkolelo zabo ezingqongqo. Uphawu lweCapricorn luzisa iJupiter ekuwa kwayo, kwaye uJupiter ngokwesiko ngumlawuli weePisces. Oku kunokubeka emngciphekweni ubudlelwane babo bonke, kuba indalo engqongqo kunye nengqiqo yeCapricorn inokonakalisa ukholo kunye neenkolelo zePisces ngokungakholelwa okulula. Iqabane lePisces aliyi kufane linikezele kwinkqubo yabo yenkolelo, kuba yile nto baphila ngayo, kodwa banokubuza kwaye bazive benesithukuthezi ngenxa yokungaqondi kwiqabane labo. Kuya kuba yintoni, iya kuba yinto endithatha isigqibo sokuba iya kuba yintoni kwaye oku kunokongamela ukuzenzela kunye nenkuthazo eyenziwa liqabane lePisces ngaphakathi.
IiPisces kunye neCapricornIimvakalelo
La maqabane abelana ngobudlelwane obunzulu beemvakalelo obunokwakhiwa iminyaka de budubule ngokwenene. Elona cala limangalisayo lobudlelwane babo kukulindela iimvakalelo, ukukhula rhoqo kunye nokukwazi kwabo ukukhupha okona kulungileyo omnye komnye. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba nabani na kubo uya kuzitshintsha iindlela zabo, nangona beya kuba yeyona nto ilungileyo banokuba yiyo. I-Capricorn inokuhlala ibuhlungu, ngelixa iiPisces zinokuhlala zincinci kwaye zingathembekanga. Xa bezimisele kakhulu kwiindlela zabo, banokuphela becaphukisana ngokwenene njengoko iCapricorn icima iinkolelo kunye nomlingo wePisces, kwaye iPisces iphoxa iCapricorn ethembekileyo, yasemhlabeni.
IiPisces kunye neCapricornImilinganiselo
Kukho ukungaguquguquki okuthile kwindlela yabo yokufikelela kumaxabiso abo. Iyamangalisa indlela umntu onje ngeePisces anokuzixabisa ngayo iimvakalelo ezizinzileyo kangako, kodwa ziyabanceda ukuba ekugqibeleni baphumze ingqondo nentliziyo yabo xa benobudlelwane beemvakalelo ezizinzileyo. I-Capricorn iya kuxabisa ngokumangalisayo ukukwazi komntu ukuba adibanise neemvakalelo zabo kwaye abe nombono ocacileyo wesiphumo esihle.
Ngelishwa, baya kuba nengxaki yokwenene ekufikeleleni ukusetyenziswa kweenkolelo kunye neemvakalelo kubomi bemihla ngemihla, kwaye ngelixa iCapricorn iya kuxabisa ukucinga okupholileyo kunye nokukwazi komntu ukuba nengqiqo, iiPisces ziya kuxabisa ngokuchaseneyo. Ngamanye amaxesha baya kuba bahluke kakhulu, iiPisces ziphupha ngothando olugqibeleleyo, iCapricorn ekwazi ukuba akunakwenzeka, iiPisces zicinga uThixo onentshebe yegolide, iCapricorn ekholelwa kulo mzuzu, okanye ukutyelela icawa ngenxa yesithethe kunokuba inkolelo. Akusayi kuba lula kodwa banokuxabisana ngokwaneleyo ukoyisa iiyantlukwano zabo.
IiPisces kunye neCapricornImisebenzi ekwabelwana ngayo
Xa beqala ubudlelwane babo, baya kufuna ukwenza yonke into kunye. Nangona umdla wabo uhlala uhluke kakhulu, iCapricorn iya kuphefumlelwa ukuba ingene ngaphakathi kwihlabathi lePisces, njengoko iiPisces ziya kufuna ukusombulula i-equation ngaphakathi kweqabane labo leCapricorn. Ekuhambeni kwexesha, imisebenzi yabo iya kwahlula, njengoko beqonda ukuba izinto iCapricorn ifuna ukuzenza ziyadika kwiiPisces, ngelixa izinto zePisces zithanda ukwenza, ziqhube iCapricorn ngokuphambana - kungekho sicwangciso, kungekho njongo okanye naluphi na uhlobo olubonakala luluncedo. Sekunjalo, bobabini baya kuba nesidingo sokubambelela kwisithethe, iCapricorn ngokuhlonela isiko ngokwalo, kunye neePisces ngezizathu zothando, kwaye oku kufanele kubancede bakhe imisebenzi eyaneleyo ekwabelwana ngayo njengoko ixesha lihamba.
Ubudlelwane phakathi kweCapricorn kunye neePisces zibalisa ibali malunga namathuba okuphefumlelwa. Ukuba umntu onje ngeCapricorn unokutsalwa kwibali lothando eliphambeneyo, elimnandi nelingalindelekanga, oku kufuneka kwenziwe yiPisces. Ngembuyekezo, iCapricorn iya kunika iqabane labo lePisces uzinzo, uxolo kunye nokuphumla okuthile kwiinkanyamba zabo zeemvakalelo. Kukho indlela entle apho iCapricorn inokunceda ngayo iiPisces ukuba zibeyinyani kwaye zisebenziseke, ngelixa ziziva zonwabile kwaye zinethemba ngokwazo.
Nangona kunjalo, kukho imiceli mngeni kunxibelelwano lwabo, ikakhulu olumelwe ngokuthanda kwabo iJupiter. Kunokuba nzima kubo ukudibanisa iindlela zabo ezahlukeneyo zenkolo, ukholo kunye neenkqubo zabo zeenkolelo ezahlukeneyo. Ukoyisa oku, kungcono ukuba bobabini bazibuze- ngaba inkqubo yabo yenkolelo iyasebenza? Kwaye ngaba elinye iqabane labo liyasebenza? Ukuba bayaziqonda iimpendulo zale mibuzo, banokufumana intlonipho eyaneleyo yokushiya iJupiter yomnye nomnye.
Iiary Aries Itaurus Leo Pisces